ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: ၂၀၁၄ တဂ်ပို့စ်
ရေးလဲရေး ဘလော့ရွာလဲ အားတဲ့အခါ လျောက်လည်။ ဒါမှ ပုိုပျော်စရာကောင်းမှာ။ လာခဲ့မယ်ဆုိုပြီး ပျောက်နေရင်တော့ လေးခွနဲ့ လာထုမယ်။း)
ပြန်ရေးမယ်ဆိုလို့ နေ့တိုင်းလာချက်ပါမယ် မောင်မျိုး
‘ကလစ်လေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီး ဖျက်လိုက်ဖို့ ၀န်မလေးတတ်တာ အမှန်ပါပဲ’ Credit :P
ပို့စ်မတင်မချင်း အနားမှာ ရစ်သီရစ်သီလုပ်မိတာ ဆောတီး မောင်မျိုးရေ... :D
အရှိန်လေးရဘို့ အစပျိုးပြီဆိုတော့ နောင်ကို ပုံမှန်လေး ဘလော့ဂင်းနိုင်ပါစေ... အသံတိတ်အားပေးတဲ့ စာဖတ်သူများကိုလဲ အစဉ်လေးစားလျှက်ရှိပါတယ်။
ပထမတလှမ်းကတော့ ဒီလိုပဲ...၊ ရေးရတာ စာမချောသလိုလို၊ အကြောင်းအရာတွေက ဆက်စပ်မှု မရှိသလိုလိုနဲ့....၊ နောက် ၂ ပုဒ်လောက်ဆို အရင်အတိုင်း ပြန်အိုကေ သွားလိမ့်မယ်...၊း) ကဲ.. ဆက်သာရေးတော့ဗျာ..။
စတိုင်မလိုင်ကြီးနဲ့မောင်မျိုး...ပျောက်ချက်သား ကောင်းချက်...Warmly welcome back !
စစ်ဖြစ်တဲ့ နှစ်မှ တပ်ထဲ လိုက်တာလား.. တပ်ပျက်မှ ဗိုလ်ချုပ် ရာထူး တိုးတာလား.. ။ ဘလော့စပေါ့ ဖျက်မဲ့ နှစ်ထိတော့..ဘလော့ ရေးလိုက်အုံးမယ်ကွာ..း)
စာရေးကောင်းတဲမောင်မျိုးနဲ့ ဖဘမှာတရင်းတနှီးမပြောဖြစ်ပေမယ့် ဘလော့ထဲမှာစာတွေလာဖတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်းရင်းနှီးနေတာအမှန်ပါပဲ.
တကယ်တော့ဖဘထက်ဘလော့ဟာသိပ်တန်ဖိုးရှိတာကို ကျမတို့အားလုံးကခေတ္တခဏမေ့လျော့နေကြတာနေမှာပါလေ ။